Anya: Heatmapping na ofufe | Martech Zone
EyeQuant bụ ịkọ amụma nlere anya na-eleba anya n'ihe ndị ọrụ na-ahụ na ibe n'ime nkeji atọ mbụ. Echiche ahụ dị mfe: n’ime nkeji 3 onye ọrụ kwesịrị inwe ike ịhụ onye ị bụ, ihe uru ị bara bụ, yana ihe ị ga - eme. EyeQuant na-enye ohere maka imepụta atụmatụ nke ibe iji hụ na nke a bụ ikpe.
Nke a bụ nsonaazụ efu nke EyeQuant demo anyị… Enwere m ezigbo obi ụtọ na ebe a na-etinye uche na ibe obibi anyị!
Ihe na-ekewa EyeQuant na ọrụ ndị ọzọ bụ eziokwu na ọ na-ewe nkeji ole na ole iji nweta nsonaazụ ahụ. Nsonaazụ ahụ batakwara na map atọ dị iche iche:
The ntị nlebara anya na-egosi mpaghara nke nseta ihuenyo gị kachasị, ọkara ma ọ bụ opekata mpe, n'otu n'otu. Karịsịa anya-adọta ebe na-acha na a ọgaranya-acha ọbara ọbara, nkezi ebe na-akara edo edo, ndị na-adịghị ike ebe nke gị nseta ihuenyo ga-egosi na-acha akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ. Mpaghara uzo na-ewepụtaghị uche ọ bụla.
The map nghọta na-enye nkọwa kachasị ngwa ngwa nke nlebara anya nke ibe weebụ gị: ọ na-egosi na ilele anya ihe ndị ọrụ ga-amata na sekọnd atọ mbụ nke nleta ha. Dabere na ngụkọta nke ọgụgụ isi kachasị elu na nkezi dị anya site na ihuenyo ahụ, mpaghara nghọta nke map nghọta bụ ndị ọrụ gị ga-ahụ n'ime usoro nghazi a dị oke mkpa.
The Mpaghara Mmasị atụmatụ na-enye nsonaazụ zuru ezu nke EyeQuant. Ọ ga - enyere gị aka ịkọwa mpaghara 10 na nseta ihuenyo gị, nke EyeQuant ga - agbakọ ọnụego pasent, dịka + 45% ma ọ bụ -23%. Uru ahụ na-egosi ole (ma ọ bụ obere) na-egosipụta mpaghara ma e jiri ya tụnyere nkezi nseta ihuenyo.
Ego ọrụ ahụ dị mma, yana nyocha 5 maka $ 199 / mo US ma ọ bụ 50 maka $ 449. Enwekwara ọnụahịa ụlọ ọrụ dị na ntanetị dị na German na Bekee. EyeQuant nwekwara API na ngwugwu reseller dị!
Tags: nlebara anyaokpomokuikpo ọkụnghọta nkewa
Mee 15, 2012 na 6: 30 PM
EyeQuant ngalaba-nchoputa ebe a. Daalụ maka mkpu si Douglas! Nke a bụ naanị mmalite na EyeQuant nwere ọtụtụ ihe dị mma na ọkpọkọ maka 2012. Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ gị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nzaghachi, ọ ga-amasị m ịnụ gị site na fabian na eyequant dot com.